Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Brits: Avoahy ny trano izahay ary miala sasatra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Nihitsoka tao an-trano nandritra ny volana maro ny olona ary ity fikarohana ity dia mampiseho amintsika fa marary izy ireo noho ny fahitana ny rindrina efatra.
Maherin'ny antsasaky ny olon-dehibe UK izay milaza fa tsara kokoa noho ny taloha izy ireo talohan'ny areti-mifindra Covid dia hampiasa ny vola fanampiny hivoaka amin'ny fialantsasatra amin'ny 2022, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Ny iray amin'ny dimy amin'ireo olona 1,000 namaly ny WTM Industry Report 2021 dia nilaza fa tsara kokoa noho ny talohan'ny Covid izy ireo, raha avo kokoa ny fivoahana.
Raha nanontaniana hoe: “Amin'ny lafiny ara-bola, tsara ve ianao sa ratsy kokoa hatramin'ny niandohan'ny areti-mifindra?”, ny ankamaroan'ny namaly (62%) dia nilaza hoe 'mitovitovy'; 20% no nilaza fa tsara kokoa izy ireo ary 18% ratsy kokoa. Nasaina nandinika ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin’ny valinteniny ireo namaly.
Rehefa nanontaniana ireo izay nilaza fa tsara kokoa izao izy ireo: “Inona no kasainao hampiasaina amin’ny vola fanampiny?” fialantsasatra no nivoaka ho valiny ambony indrindra, miaraka amin'ny 55% milaza fa mikasa ny hampiasa izany izy ireo hamandrika fialan-tsasatra. Ny tarehimarika dia saika avo roa heny noho ny valiny tsara indrindra manaraka, izay ny 31% amin'ireo izay tsara kokoa noho ny talohan'ny COVID dia nilaza fa handany izany amin'ny fanatsarana trano.
Ny iray tamin'ny efatra (28%) dia malina no nilaza fa “hitahiry ny vola ao amin'ny banky mandritra ny andro orana”; 26% no nilaza fa handany izany amin'ny vata fampangatsiahana vaovao na zavatra mitovy amin'izany amin'ny sokajy entana fotsy ary ny 21% dia hividy fiara vaovao. Manodidina ny iray amin'ny 10, (12%) no nilaza fa hametraka ny vola hividianana trano vaovao.
Mampahery kokoa ho an'ny indostrian'ny fitsangatsanganana, mbola betsaka ny mbola tsy tapa-kevitra ary mety ho voahozongozonin'ny mpaninjara fitsangatsanganana sy ny toerana haleha izy ireo handany ny volany amin'ny fialantsasatra. Amin'ireo izay milaza fa tsara kokoa izy ireo hatramin'ny nanombohan'ny COVID, 7% no “tsy nieritreritra” izay hataony amin'ny vola.
Hoy ny talen'ny fampirantiana WTM London, Simon Press: “Mozika ho an'ny sofin'ny indostrian'ny dia ity. Ny iray tsara vintana amin'ny dimy amin'ny UK izao dia mahita ny tenany ho tsara kokoa ara-bola noho ny taloha an'i Covid, satria manana 'tahiry tsy nahy' izy ireo ary ambany ny trosan'ny tokantrano.
“Nihitsoka tao an-trano nandritra ny volana maro ny olona ary ity fikarohana ity dia mampiseho amintsika fa marary izy ireo noho ny fahitana ny rindrina efatra.
"Raha tokony handany vola amin'ny fanatsarana trano na milina fanasan-damba vaovao mamirapiratra izy ireo, dia te-hivoaka sy hivezivezy fotsiny ary hanararaotra ny fiainana ankehitriny mihamaivana ny fameperana. Inona no fomba tsara kokoa hialana amin'izany rehetra izany noho ny famandrihana fialantsasatra?
“Efa fantatray fa misy ny fitakiana ny fitsangatsanganana any ampitan-dranomasina ary ny toerana hifaninanana mba hisarihana ny fandaniam-bolan'ireo izay manam-bola handoro sy izay tena mety hivarotra sy hiparitaka amin'ny fialan-tsasatra manaraka. .
"Ankoatr'izay, miaraka amin'ny 7% fanampiny milaza fa tsy nieritreritra izay hataony amin'ny volany fanampiny izy ireo, ny orinasam-pitaterana dia mety hiditra amin'ny ampahany lehibe kokoa amin'ny mofomamy Covid windfall matsiro."